Nsọ Asọ – 2azụ
Home / Church / The sacraments / Nsọ Asọ
Holy iwu bụ a sacrament na nke ụmụ mmadụ na-mma ma ọ bụ “họpụtara” site Church ịrụ isii ndị ọzọ sacraments. Ndị a wee ịbụ dikọn, nchụàjà ma ọ bụ ndị bishọp.
Otú ọ dị, na sacrament nke Holy iwu a rụrụ naanị site bishọp, na na-eso kpọmkwem site Bible.
E nwere ihe ike n'ụzọ na Akwụkwọ Nsọ na nke Chineke oku na-aga ozi ọma e nyere na natara. Ọ na-aga site na Chineke na Jizọs, si Jesus na Ndịozi, na site na Ndịozi na ha na-anọchi (ịhụ Oziọma Luk 10:16 na Oziọma Jọn 13:20; 20:21). Ya mere, na sacrament nke Holy iwu nwere ike rụrụ naanị site Onyeozi ma ọ bụ naanị otu onye ndịozi ikike e nyere. Ọmụmaatụ, Pọl na-ede na ya Akpa Letter Timoti (4:14), “Adịla na-eleghara onyinye i nwere, nke e nyere gị site na amụma kwuru mgbe kansul nke okenye wee bikwasị aka ha ị” (ịhụ 5:22, ya Nke abụọ Letter Timoti, 1:6, na ya Letter na-Titus 1:5). Ya mere, na sacrament ndị a ihe unbroken yinye si Jesus taa Kacha ọhụrụ Catholic nchụàjà. (More on a n'okpuru.)
Ná mmalite Church, a hierarchy mepụtara na gụnyere bishọp, presbyters (ma ọ bụ okenye), na deacons, nke kwekọrọ na Israel atọ-tiered Ọdịdị nke nnukwu onye nchụàjà, -nchu-àjà, na ndi Livai (ịhụ Pọl Akwụkwọ ozi ka Phillipians, 1:1; Saint James’ Epistle, 5:14; The Book of Numbers, 32; The Second Book of Ihe E Mere 31:9-10).1 na Israel, onye nchụàjà hụrụ ka Chineke nke pụrụ iche ozi (ịhụ Malakaị 2:7), e debere iche si ná nzukọ site na otu aran na imposition nke aka (ịhụ Exodus 30:30 ma ọ bụ Deuteronomy 34:9).
Nyere na Ndịozi bụ ndị Juu, Chọọchị nakweere ndị a omenala ndị Juu n'ihi na ya rite nhọpụta.
Adịghị Anyị niile Nchụàjà?
Ọ dịghị, ma mgbe ụfọdụ, ndị mmadụ na-mgbagwoju anya site Bible ozi niile kwere ekwe na-akpọ ka iso na-nchu aja Kraist. Ọmụmaatụ, Saint Pita Akpa Letter (2:9) na-ekwu,, “Ị bụ agbụrụ a họọrọ, òtù ndị nchụàjà bụ, mba dị nsọ, Chineke n'onwe ya ndị mmadụ.” Na okwu ndị a a akwụkwọ azụ Exodus 19:6, “Ị ga-abụ m alaeze nke ndị nchụàjà na mba dị nsọ.”
Edebe ikike ịrụ sacraments na a pụrụ iche otu nke ndị mmadụ n'otu n'otu (-nchu-àjà) a maara dị ka sacerdotalism.
Na ogbugba ndu ochie, a nta, si n'aka ndị nchụàjà nchụàjà adị n'ime ibu nchụàjà mba Izrel. Dị ka anyị na-akọwa, ọ bụ otu n'ime New ndu.
The Bible na-ekpughe na si n'aka ndị nchụàjà nchụàjà na-a ime mmụọ nna, nke mere na ndị Catholic Church na-akụzi na nchụàjà emume debeere ndị naanị. Ọmụmaatụ, na Old Testament, na Akwukwo nke ndi ikpe (18:19) na-ekwu,: “Bịa soro anyị, na ịdị anyị a nna a nchụàjà.”
N'otu aka ahụ, na agba ohu, Pọl na-ede na ya Mbụ Letter na Kọrint (4:15) na “N'ihi na ọ i nwere ọtụtụ nduzi na Christ, ị na-adịghị ọtụtụ ndị nna. N'ihi na m ghọrọ nna gị na Kraịst Jizọs site na Gospel.” Paul nkọwa sara mbara karị ọzọ na ime mmụọ a nna ma ọ bụ si n'aka ndị nchụàjà nchụàjà ná mmalite nke otu isiakwụkwọ, mgbe ọ na-ekwu, “Nke a bụ otú onye kwesịrị-ele anyị, dị ka ndị ohu Kraịst na-elekọta ụlọ nke omimi nke Chineke” (4:1).2
Ná mmalite nke ozi ya, Jesus kwuru na ìgwè mmadụ yiri “atụrụ na-enweghị onye ọzụzụ,” si, “Ihe ubi hiri nne, ma ndị ọrụ dị ole na ole; ekpe ekpere ya mere Jehova nke owuwe ihe ubi ka o ziga ndị ọrụ n'owuwe ihe ubi ya” (ịhụ Matiu 9:36, 37-38). A okwu tupu ya nhọrọ nke ndịozi iri na abụọ, onye Ọ-enye ike ma ziga ha dị ka ya vicarious ọzụzụ atụrụ na-ekwesị ntụkwasị obi (ịhụ Oziọma Jọn 21:15-17; na Ọrụ nke Ndịozi 20:28; na Pita Akpa Letter 5:2). “Ọ bụghị unu họọrọ m,” O mechara chetaara ha, “ma m họọrọ unu na họpụtara gị na ị ga-aga ma mịa mkpụrụ” (John 15:16). “Olee otú ndị mmadụ ozi ọma ma ọ bụrụ na ha na-zitere?” Pọl na-ede na ya Degaara ndị Rom, 10:15.
Ọ dịghị ebe Akwụkwọ Nsọ ke owo-iche na-eje ozi maka onwe ya. “Otu anaghị nsọpụrụ onwe, ma a na-akpọ site na Chineke, dị nnọọ ka Erọn bụ,” dee Paul ya Letter ndị Hibru 5:4 (ahụ ya Letter ndị Kọlọsi 1:25, nwekwara). Mgbe ụfọdụ ndị Juu exorcists anwa mba mmụọ ọjọọ “site Jesus emi Paul ọkwọrọde,” ndị mmụọ zaghachi, “Jesus m maara, na Paul m maara; ma olee ndị unu?” (Ọrụ nke Ndịozi, 19:13, 15).
Ya mere, a nti oku ozi nkịtị na-agụnye nkwenye nke ndịozi hierarchy. Ọmụmaatụ, na Act nke onyenchịkwa (1:15), Matthias anaghị ebili ma na-ewe ya na-eje ụlọ ọrụ site aka ya họrọ. Ọ na-hoputara dị ka ikike nke Pita na ndịozi, n'okpuru nduzi nke Mmụọ Nsọ. Adịghịkwa Paul, n'agbanyeghị nke ya ịrịba ama akakabarede, gawara onwe ya ikwusa ozioma, azọrọ Chineke aran onwe ya. Dị ka e kwuru na ya Letter ndị Galeshia (1:18), ọ na-aga mbụ Jerusalem na-enweta ihu ọma nke onyenchịkwa, na mgbe e mesịrị ọ na-alaghachi iji nyochaa gospel na ọ na-ekwusa ozi ọma bụ ziri ezi (2:2).
Mgbe Kraịst niile na-akpọ ka ozi ọma, NdŽozi na ha na-anọchi nwere ihe pụrụ iche oku nke-echebe ndị na-edebe nke Okwukwe na-ezi ndị kwesịrị ntụkwasị obi. na Oziọma Matiu (28:19-20) Jizọs na-ekwu na Ndịozi, “Ya mere gaanụ mee na-eso ụzọ nke mba nile, eme ha baptizim n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ, ezi ha ka ha debe ihe niile m nyere unu n'iwu.”
N'otu aka ahụ, na ya Nke abụọ Letter Timoti, Pọl gwara: “Debe eziokwu na e nyere gị site na Mmụọ Nsọ onye bi n'ime anyị,… Ihe ị nụrụ site m n'ihu ọtụtụ ndị àmà na-enyefe ndị kwesịrị ntụkwasị obi bụ ndị ga-enwe ike iji kụziere ndị ọzọ nwekwara.” (-ahụ amaokwu 1:14; 2:2; 1:13; na Ọrụ nke Ndịozi 2:42).
n'ezie, mgbe Ya na-eje ozi na-akụziri ya bu Kraist n'onwe Ya onye na-akụzi na site na ha ka O kwuru: “Onye na-anụ na ị na-anụ olu m, na onye na-ajụ gị, jụrụ m, na onye na-ajụ m jụrụ ya bụ onye zitere m” (Luke 10:16). N'ebe ọzọ O kwuru, “N'ezie, n'ezie, M asị unu, onye na-anabata onye ọ bụla m ga-eziga na-anabatakwa m; na onye na-anabata m na-anabatakwa onye ahụ nke zitere m” (John 13:20; mesiri ike kwukwara).
Ndịozi na-nyere ikike nke elekọta Oriri Nsọ ememe. Ọmụmaatụ, mgbe ọ na-eguzobe Oriri Nsọ na Nri Anyasị Ikpeazụ, Ọ n'akpọ ha, “Ndi a na-echeta m” (Luke 22:19 na Pọl First Letter na Kọrịnt, 11:23-24). Ndịozi na-enweta a pụrụ iche na-ekere òkè ya nchụàjà na ya, ndị isi ọrụ nke àjà Eucharistic àjà na nnọchite nke kwesịrị ntụkwasị obi (CF. nwere. 5:1).3
Ndịozi na-enweta site na Jizọs ike ịgbaghara mmehie site onyinye nke igodo nyere Pita na ikike” jikọtara na omume rụrụ” edunye na ha dị ka otu ìgwè (CF. Matt. 16:19; 18:18). “Dị ka Nna m ziteworo m,” Onye Nzọpụta na-agwa ha, “bụlagodi Ezipuru m gị. … Anata Mmụọ Nsọ. Ọ bụrụ na unu na-agbaghara ndị ọ bụla mmehie, ha na-agbaghara; ma ọ bụrụ na ị na-anọgide na-adị ọ bụla mmehie, ha na-edebe” (John 20:21-23; mesiri ike kwukwara).
Ọ bụ ezie na ozuzu nke ndịozi ụlọ ọrụ na ya niile prerogatives e gafeere, ndị bishọp, dị ka kpọmkwem ndị na-anọchi na Ndịozi, nọgidere na isi nke ndị isi chọọchị. ↩
The okwu “omimi,” na Greek, mysterion, ka a sụgharịrị na Latin dị ka omimi ma ọ bụ “sacrament.” The Greek Orthodox-anọgide na-a ụbọchị na-ezo aka na sacraments dị ka ihe dị nsọ “Mysteries.” ↩
The echiche Bible nke Oriri Nsọ dị ka a Àjà (CF. oge. 1:11; 1 Cor. 10:1-5, 15-22; 11:23-30; nwere. 10:25-26), n'ezie, n'ihu ihe na ịdị adị nke a si n'aka ndị nchụàjà nchụàjà–n'ihi na ọnụnọ nke a àjà odi a nchụàjà na-enye ya. Pope Saint Clement, ede si Rome na banyere afọ 96, n'ụzọ doro anya dị iche n'etiti Eucharistic àjà awa site eje nchụàjà na àjà ime mmụọ awa site nchụàjà nke ndị nkịtị (CF. Clement nke Letter na Kọrịnt 40-41). Aghotagh Oriri Nsọ Àjà, abụghị ndị Katọlik mgbe ụfọdụ ebubo Katọlik nke “re-na-achụ àjà” Jesus na Mass. Eucharistic àjà bụ bụghị a re-achụ àjà, Otú ọ dị, ma a re-ngosi nke otu Àjà nke Calvary. Christ-adịghị anwụ anwụ ọzọ; Nzọpụta ya anụ ahụ na ọbara na-mere ugbu na ichu-àjà n'okpuru anya nke Bread na Wine nke na-ekwesị ntụkwasị obi May “akpọsa ọnwụ Onyenwe anyị ruo mgbe ọ bịara” dị ka Pọl dere na ya Mbụ Letter na Kọrint (11:26). ↩